Firehetana teny Andavamamba :: « Aza vonoina i mamanay », hoy ilay zaza nieren-doza tamin'izy dimy mianaka • AoRaha
Firehetana teny Andavamamba « Aza vonoina i mamanay », hoy ilay zaza nieren-doza tamin’izy dimy mianaka
Mampiahiahy ny fomba nahafaty an’ireto efa-mianaka, reniny sy ny zanany telo, tamina hain-trano nitranga tetsy andavamamba anatihazo, tamin’ny alin’ny alahady lasa teo. Mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly kosa ny zaza iray nieren-doza, tamin’izy dimy mianaka tao an-trano. Toa manao krizy milaza ny zavatra hitany ity farany ka mampiahiahy an’ireo mpanao famotorana.
Mampahonena tanteraka ny voina avy tamina hain-trano nitranga tetsy Andavamamba Anatihazo, tamin’ny alin’ny alahady lasa teo. Renim-pianakaviana iray sy ny zanany telo mianadahy no indray nindaosin’ny fahafatesana. Tsy mbola fantatra mazava, hatreto, ny nahatonga ny fahamaizana. Mampiahiahy kosa ny fomba nahamay azy ireo tao, araka ny fitantaran’ny mpiara- monina sy ny fianakaviana. Ny ao amin’ny borigady misahana ny heloka bevava (BC) etsy Anosy no mandray an-tanana ny fanadihadiana tamin’ny fisiana aina nafoy tamin’io hain-trano io. Efa natolotra ny fianakaviana ireo razana efatra kila forehitra. Voalaza fa any amin’iny faritra Antsirabe iny no handevenana azy ireo. Mbola manaraka fitsaboana etsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) kosa hatramin’ny omaly antoandro ny zazalahikely iray, efa-taona, iray tampo amin’ireo ankizy telo namoy ny ainy.
Trano hazo sady fivarotana saribao no nirehitra teny Andavamamba Anatihazo. Antso vonjy sy tabataba no nanaitra ny olona teo amin’ny manodidina. Ny lelan’afo nijoalajoala no tazana. Soa fa tsy niitatra ny afo. Ny fokonolona teo an-toerana ihany no niaranisalahy namono izany teo am-piandrasana ny sampana mpamonjy voina. «Ny antso vonjeo nataon’ny tompon-trano teo akaikinay no henoko voalohany. Nitazana teo ambaravarakenly aho. Efa niredareda ny afo», araka ny fitantaran’i Tahiana Nomenjanahary Charline, mpiray vodirindrina tamin’ilay trano nirehitra. Minitra maromaro no namonoana ny afo. Indrisy, tsy avotra ny olona efatra tao. Kilan’ny afo teo ambony fandriana izy efa-mianaka. Tafavoaka ny zaza- lahikely iray, efa-taona, saingy naratra main’ny afo. Tsy naninona kosa ny zazalahikely iray, roa taona.
«Kamiao roa famonoana afo no indray nahetsika , vantany vao naheno ny antso vonjy izahay. Fantatra teny an-dalana fa efa matin’ ny fokonolona ny afo. Re fa misy olona namoy ny ainy tao ka nidina naka ny razana teny ihany izahay», hoy ny kaomanda Randrianarisoa, lehiben’ny mpamono afo ao amin’ ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalàna.
Ahiana ho nisy nandoro
Ankona, nalahelo tanteraka ny mpiara-monina nahita an’ity loza indray mipimaso nihatra tamina fianakaviana kely ity. Samy manana ny filazany ny olona eny an- toerana. Misy ny miahiahy, taorian’ ny feo sy vaovao re fa nisy ninia nandoro tao an-trano ireo olona ireo. Hafahafaha ihany koa, hoy ny olona, ny fomba nitrangan’ny loza sy ny nahafaty azy efa-mianaka ireo.
«Toa hoe nisy nanafika tao izy mianakavy kely. Mety ho nodoran’ ireo olon-dratsy ny trano, taorian’ izay. Mahagaga ihany koa fa avy eny ambony ny afo. Misy faritra tsy voakasika ny teo ambany», hoy ny mpiara-monina milaza ny eritreriny sy ny fomba nahitan’izy ireo ny loza.
Milaza ihany koa ny fianakavian’ ireto namoy ny ainy fa tsy mampiasa herinaratra sady tsy manao afon-dabozia ireto ankohonana kely ireto. Efa teny ampandriana izy ireo no niseho ny firehetana. Tsy mbola fantatra mazava anefa ny zava- niseho. Efa eo am-panaovana ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana, indrindra amin’ny fanangonam-baovao eny an-toerana. «Efa nisy ny olona nohenoina, toa an’ilay olona nanavotra sy namoaka an’ilay zazakely, roa taona. Anisan’ ny nahita ny niantombohan’ny afo ihany koa izy. Tsy mbola henonay anefa ny momba an’io resaka fanafi- hana io. Hohamarinina ny fisian’izany», hoy ny polisy ao amin’ny Bc misahana ny famotorana.
Mbola hohenoina eny amin’ny polisy ny fitantaran’ny fianakaviana manamanjo, indrindra ilay zazalahy, efa-taona, maratra. Nambaran’ ny fianakaviana tonga nikarakara teny amin’ny hopitaly fa «manao krizy milaza ny zavatra hitany ilay ankizy maratra. Tahaka ny hoe aza vonoina i mamanay».
Va lo amby roapolo taona Rainjarisoa Marie Louisety, ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy.
Roa ambin’ny folo taona i Maminiriana Herizo, zanany lahimatoa. Enina sy efa-taona kosa i Hariline sy i Heritiana samy nindaosin’ny fahafatesana tamin’iny hain-trano iny ihany koa. Tsy teo an-toerana fa nidina tany ambanivohitra ny raim-pianakaviana, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza. Ny renim-pianakaviana sy ny zanany dimy mianadahy no teo antanàna.
Tamin’io alina io ihany no nahenoan’ny fianakaviana tany Antsirabe ny loza niseho. Tsy niandry ela fa niakatra avy hatrany izy ireo. «Tamin’ny antso an-telefaonina no nahenoana ny vaovao ratsy. Fantatra fa niara-maty izy efa-mianaka. Tsy nitombina ny eritreritra ka niakatra avy hatrany izahay. Tsy nino anefa raha tsy nahita-maso mivantana», hoy ny havana akaikin’ ireo niharam-boina. Namantana teny Andavamamba ireto fianakaviana avy any Antsirabe. Ny trano efa kila hotohoton’ny afo no hita. Nihazo ny hopitaly izy ireo, avy eo, nijery an’ ilay zaza maratra sy ny razana efatra.
«Nanahirana ny fomba nilazana voalohany ny vaovao mampalahelo tamin’ilay raim-pianakaviana namoy vady aman-janaka. Tsy maintsy natao anefa izany. Ankona tanteraka izy », hoy ihany ireto fianakaviana izay mbola rakotra alahelo.
Tonga nijery an’ity voina ity teny an-toerana ny avy amin’ny biraom- pirenena misahana ny loza voajanahary ( BNGRC). Nanolotra fanampiana an’ireo niharam-boina izy ireo. Nomena vary zato kilao, voamaina dimy amby roapolo kilao sy lamba firakotra iray ny fianakaviana mana-manjo. Voalaza fa noraisin’ny BNGRC an-tanana ny lany rehetra amin’ny fitsaboana an’ ilay zazalahikely efa-taona may.
Savorovoro tany Toamasina :: Karohina ilay vehivavy nilaza ho nahita lohan’olona tao amina trano iray